Sebenzisa i-PowerShell ukukhipha izibuyekezo zeWindows 7 | Izindaba zamagajethi
I-PowerShell: Yisebenzise ukukhipha izibuyekezo ezingafuneki ku-Windows 7
Ngubani ongakaze ahlupheke ngenkinga yesikrini esiluhlaza ku Windows 7? Lolu hlobo lwenkinga lungenye ecasula kakhulu futhi mhlawumbe kunzima ukuyixazulula engavela kwikhompyutha yomuntu siqu, isimo esivame ukubangelwa lapho sifake umshayeli wehadiwe wedivayisi entsha.
Kulolu hlobo lwamacala, kuzofanele ukuthi singene ku- "Windows 7 test mode" bese sikhipha umshayeli oshilo; ngokudabukisayo, ezinye izibuyekezo ezinikezwe yiMicrosoft Beza futhi ukuzodala lolu hlobo lokuphazamiseka, bezama ukubakhipha ukusebenzisa ithuluzi elaziwa njengePowerShell.
I-PowerShell: umyalo wangaphakathi ku-Windows 7
Abantu abaningi abazi ukuthi ukhona lo myalo, ongafinyelelwa kuwo yenza kusebenze kalula kusuka ewindini lokugcina lomyalo. Inkinga enkulu ilele ekuzameni ukwazi nokukhomba kahle ikhodi noma igama lesibuyekezo esihlongozwa yiMicrosoft yeWindows 7 futhi lokho kungadala inkinga kwikhompyutha yomuntu siqu. Uma sesivele sikhombe isibuyekezo esingqubuzanayo, siphakamisa ukuthi ulandele lezi zinyathelo ezilandelayo:
Thepha ukhiye weWindows nohlobo lwesikhala sosesho "cmd".
Manje bhala ngaphakathi kwaleli windi lokugcina lomyalo ku- «I-PowerShell»Bese ucindezela entrar.
Faka ikhodi elandelayo (njengesibonelo)
Sicabange ukuthi isibuyekezo esithi "KB3035583" yiso esidala inkinga, ulayini womyalo ophakanyiswe ngaphambilini ozosisiza nathivula uma ikhona ku-Windows 7. Uma kunjalo kufanele ubhale (ngaphandle kokushiya iPowerShell) umugqa olandelayo:
Ngalokhu, uzobe usuvele usikhiphile isibuyekezo esishiwo ku-Windows 7. Inombolo esiyibeke njengokuhlonza isibuyekezo esinenkinga kulolu hlelo lokusebenza "ukucabanga", inani okufanele uliguqulele kulelo olibone njengenenkinga noma ngalokho, iMicrosoft ebingakusho ezindabeni zabo ezahlukahlukene.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » I-PowerShell: Yisebenzise ukukhipha izibuyekezo ezingafuneki ku-Windows 7
Lokhu ukubonakala kwethu kokuqala ngemuva kokuhlola i-LG G4 entsha
Isebenza kanjani i-maglev?